Amacebiso isitimela ukubhukela phambili wukuthi Akukhona nje ukubhuka amathikithi ngaphambi kwesikhathi ukuba wamukele isabelomali futhi kungasiza isiqiniseko wena ugciné izihlalo yonke uhambo lwakho. Ngokwalokhu esesixoxe ngakho amathikithi yokubhuka ekuqaleni kokuba yinzuzo enkulu, sincoma ngemvume ku ukubhuka amathikithi ngokushesha njengoba zitholakala (2-3 izinyanga ngaphambi uhambo). Ngaphezu kwalokho, ukuhlela uhambo lwakho olungaphandle kwesizini kungaqinisekisa ukuthi ugwema izixuku futhi uthole amanani angcono nakakhulu. Ungasayiphathi, ukuthi yokubhuka ekuqaleni kungakusiza ukuba ugweme izihlwele emigqeni enkulu. Ngaphezu kwalokho, uma ukubhuka ukuya ezidonsela izivakashi ngesikhathi okusezingeni eliphezulu izikhathi inkathi efana July / August, you are less likely to encounter local people and more likely to be surrounded by tourists. So although you may still be able to see all the sights at these times you will miss out on the authentic experiences. Uma kwenzeka uhamba njengombhangqwana noma eqenjini unganikezwa amalungelo entengo ehlisiwe ngohambo lwakho. Kodwa khumbula lezi izaphulelo lizoba semthethweni uma uhlale ndawonye njengendoda nenkosikazi / iqembu lonke ubude uhambo.
amathiphu Okokuqala isitimela ngenxa yokuhamba wukuthi: emazweni aseYurophu bavame ukuba isivumelwano phakathi kwabo evumela izivakashi ukuya eqele ngaphandle kokukubonisa yokuhamba. Amazwe e-European Union, ngokuqondene, ukuvumela abagibeli ukushiya bese ufaka ngaphandle kokuba ukukhombisa passport. Nokho, hhayi wonke amazwe European Union iqhaza kule nqubomgomo umngcele evulekile like Croatia, Bulgaria, futhi Romania. Ngokungqubuzanayo, there are countries that are not part of the European Union that do participate in the agreement like Switzerland and Norway.